विचार / विश्लेषण मधेसमा ओलीको गर्जन– एमाले जाइकटक गर्दैन, झिकीकटक गर्छ (भिडियोसहित)
Tuesday, 10 Jan, 2017 6:35 PM
आज हामी संक्रमणकालको अन्तिमअन्तिम चरणमा छौं । आन्दोलनले परिवर्तन ल्यायो । तर, त्यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, मूर्तरुप दिने र त्यसको वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने समय हो अहिले । संविधान निर्माण र त्यसले तय गरेका संरचनाहरु, निकायहरु तयार गर्ने, निर्वाचनहरु गराउने र राजनीतिक, प्रशासनिक, संरचनागत पक्षमा संविधानले कल्पना गरे अनुरुप स्थिरता र स्थायित्व तयार गर्ने संक्रमणकालको यो अन्तिम अन्तिम बेला हो । हामी अहिले यहाँ आइपुगेका छौं । यतिबेला स्वार्थहरु टकराएका छन् । विभिन्न प्रकारका शक्तिहरुले खेल्ने, उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल देशलाई मोड्न खोज्ने प्रयास हुने गरेका छन् । मैले भनिरहनु पर्दैन, हाम्रो देशमा अत्यन्तै अस्वभाविक, अनुचित र अशोभनीय तहसम्म अनेक प्रकारका स्वार्थ टकराईरहेका छन् । विभिन्न शक्तिहरु यसमा केन्द्रित भइरहेका छन् । यतिबेला हामी नेपाली जनताले सजग हुनु पर्ने बेला छ । यतिबेला नै हामीले उपलब्धीहरुलाई ठीक ढंगले संस्थागत गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र स्थायित्वमा देशलाई लाने सोच र दृढता हामीमा चाहिन्छ । देशलाई पछाडि धकेल्न खोज्ने, अल्मल्याउन खोज्ने, अघि बढ्न नदिने वा नेपालको विविधतालाई दुरुपयोग गरेर अनेक प्रकारका सामाजिक द्वन्द्वहरु जातका नाममा, भाषाका नाममा, क्षेत्र र भूगोलका नाममा जता जता सकिन्छ त्यसका नाममा बैमनस्यता, द्वेष र घृणा फैलाउन खोज्ने प्रयास भइरहेका छन् । आजको दुनियाँमा द्वन्द्व एउटा उद्योगका रुपमा चलिरहेको छ । द्वन्द्व उद्योग जव फस्टाउँछ त्यसपछि ब्यवस्थापनको विजिनेस सुरु हुन्छ । नेपाली जनताले यसमा सजग हुनु पर्छ । द्वन्द्व उद्योग र ब्यवस्थापन ब्यवसाय । हामी द्वन्द्व ब्यवसायीहरुको षडयन्त्रको शिकार भएका छौं । अनुत्पादक रोजगारी प्रदान गर्ने र तिनीहरुलाई द्वन्द्व ब्यवसायी वा द्वन्द्व ब्यवस्थापनका नाममा अल्झाइराख्ने वा द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामी नेपाली जनता सजग हुन जरुरी छ । दृढताका साथ हामीले आ–आफ्ना समस्या पहिचान गर्ने, ती समस्याहरुको हामी आफैंले समाधान गर्ने र देशलाई एकता र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । जनता आफैं छरिएको अवस्थामा यो उद्धेश्य पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यस कारण जनतालाई ब्यवस्थित विचार दिन, संगठित गर्न, सही दृष्टिकोण भएको सशक्त र सुदृढ पार्टी चाहिन्छ । देशलाई सही विचार दिन सक्ने, जनतालाई संगठित गरी सही बाटोमा हिंडाउन सक्ने संगठन भनेको नेकपा एमाले नै हो । हामीले कुलोपैनी खन्न देखि लिएर, बाटोघाटो बनाउने देखि लिएर, राष्ट्रियताका लागि संघर्ष र आन्दोलन गर्ने देखि लिएर ध्वांस जमाउनेहरुलाई चुनावमा पछार्नेसम्मका र एमालेलाई विजय बनाउनेसम्मका अभियानलाई अगाडि लैजानु पर्छ ।
एमाले मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जोसँग जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो सही, सामयिक र वैज्ञानिक विचार छ । जनताको बहुदलीय जनवाद सही छ, वैज्ञानिक छ, जनमुखी छ, अग्रगामी छ, परिवर्तनकारी छ, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा छ र विकासको पक्षमा छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनेक कोणबाट अथवा, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियताको कोणबाट जनताको बहुदलीय जनवाद मात्रै यस देशलाई बाटो देखाउन सक्षम छ । अरु पार्टीहरु कुहिराको कागजस्ता छन् वैचारिक हिसावले । के विचार भन्यो भने हामी त प्रजातन्त्र भन्छन् । कस्तो हुन्छ त प्रजातन्त्र ? उनीहरुसँग कुनै खाका छैन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रणाली अथवा राष्ट्रियतका सवालमा वा अरु विकासका प्रश्नमा कुनै अवधारणा छैन । तर, नेकपा एमाले यी विचार दृष्टिकोण अंगालेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो कामको बाटो देखाउने वैज्ञानिक सिद्धान्त अपनाएको पार्टी हो । यो पार्टी विचारमा मात्रै यति सशक्त र सवल होइन, सांगठनिक रुपले पनि सबैभन्दा ब्यवस्थित, सबभन्दा सशक्त, सबभन्दा ब्यापक, सामाजिक जीवनका सम्पूर्ण क्षेत्रमा पुगेको पार्टी हो । वैचारिक रुपमा, ब्यवहारिक रुपमा, सांगठनिक रुपमा देशब्यापी, जनब्यापी, अत्यन्त सुदृढ संगठनको रुपमा, विस्तृत संगठनको रुपमा नेकपा एमाले छ । मौका पाउँदा यस पार्टीले देशलाई हाँक्न सक्छ । मौका पाउँदा विकासका बाटा देखाउन सक्छ । देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ । देशको विकास कसरी हुन सक्छ ? निराशालाई तोडेर आशालाई जगाउन सक्छ । त्यो कुरा पनि यस पार्टीले ब्यवहारमा देखाएको छ । एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा जनतामा कसरी आशाको लहर सिर्जना हुन्छ, विकासको एउटा उत्साह सिर्जना हुन्छ । अत्यन्त प्रतिकुल अवस्थामा पनि प्रतिकुलतालाई चिरेर सफलताका साथ अगाडि जान सक्छ । नेकपा एमाले यतिसम्म मजबुत छ, देश भित्रका र बाहिरका अनेक प्रकारका बलिया हौं, ठूला हौं भन्ने तागतहरु हाम्रा विरुद्ध मोर्चा कसेर आइलाग्नु पर्यो । यसो विचार गर्नुस् त ! कति बलियो रहेछ एमाले । राष्ट्रिय स्वाभीमानः यदि एमाले हुँदैनथ्यो भने, विचार गर्नुस् त ! नेपालका टाउकामा ककस्ले टेक्थ्यो टेक्थ्यो । तर, नेकपा एमाले छ यस देशमा । त्यसैले कसैलाई नेपालको टाउकोमा टेक्न दिंदैन । यसलाई सरकारमा जान नदिन, सरकारको नेतृत्व गर्न नदिन कस्सिएर आए । यस्तो लाग्थ्यो कि सिनेमाको सिन जस्तो सबै शक्तिहरु सोत्तर भए । फेरि उनीहरुले एउटा षडयन्त्र गर्नु पर्यो । देशी विदेशी शक्ति मिलेर एमाले नेतृत्वको सरकारलाई हटाए । अलिकति समयमा नेकपा एमालेले जुन विकासलाई सञ्चार गर्यो, जसले हामीले गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने भावना विकास गरायो । अनेक विकासका कार्यक्रम ल्यायो । मान्छेमा निराशा थियो, त्यसलाई आशामा परिणत गर्यो । उत्साहमा परिणत गर्यो, आत्मविश्वास जगायो । राष्ट्रिय स्वाभीमानः यदि एमाले हुँदैनथ्यो भने, विचार गर्नुस् त ! नेपालका टाउकामा ककस्ले टेक्थ्यो टेक्थ्यो । तर, नेकपा एमाले छ यस देशमा । त्यसैले कसैलाई नेपालको टाउकोमा टेक्न दिंदैन । विचारको हिसावले, संगठनको हिसावले, ब्यवहारको हिसावले, जनविश्वासको हिसावले एमाले पहिलो पार्टी हो । कसै कसैले एमालेलाई दोस्रो पार्टी हो भन्छन् । तीन वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यो । तीन वर्ष अगाडि कसैले फूटबलमा स्वर्ण पदक लिएको थियो भने सधैं स्वर्ण पदक दिन्छ ? तीन वर्ष अगाडिको पौडीवाज आज पनि पौडीवाज नै छ ? तीन वर्ष अगाडिको क्रिकेटको च्याम्पियन आज पनि क्रिकेटको च्याम्पियन नै छ ? तीन वर्ष अगाडिको दोस्रो धावक आज पनि दोस्रो नै हुन्छ ? तीन वर्ष अगाडिको कुरा हो यो । आज एमालेको कम्मर कम्मर आउने पार्टी कुनै पनि छैन । मान्छे तीन वर्ष अगाडिको कुरा गरेर अहिले एमालेलाई दोस्रो पार्टी भन्छन् । धेरै पनि भन्नु हुँदैन, फेरि सातो गएर चुनावै गर्दैनन् । त्यसै भएर मैले धेरै भनेको छैन, कम्मर कम्मर सम्म मात्रै भनेको छु । हामी निर्वाचनतर्फ जाँदैछौं । हामी राष्ट्रिय स्वाभीमान र राष्ट्रियताको भिषण लडाईं लडिरहेका छौं । विकासका कुराहरुलाई केही होइन झैं गरेर नेपाललाई बाहिर लेबर पठाउने देशको रुपमा विजिनेस चलाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसको अर्थ मैले म्यानपावर कम्पनीलाई भन्या होइन, म्यानपावर कम्पनीले त बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीमा पठाउने काम गर्या छ । तर, यहाँ समृद्ध हुन नदिने, नेपालीहरुलाई बाहिर लगेर टेबुल पुछ्ने मात्रै बनाउने षडयन्त्र भइरहेको छ । यहाँ कुन कुन पार्टी, कतिवटा नेता, नेता हुन् कि कमिसन एजेन्ट बुझ्न गाह्रो छ । त्यसकारण जनता सजग हुनु पर्छ । अहिले यतिसाह्रो हौसिएका छन्, मलाई अचम्म लाग्छ । तपाईंहले पनि सुन्नु भयो होला– एमालेलाई प्रवेश निषेध, बढार्ने, अव विदा गर्ने कुरा । कतिपयलाई त म जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिनँ, हाम्रै गल्ती हो– नागरिकता दिइसकियो, ठूल्ठूला कुरा गर्न थालिसके । म भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्झाउन चाहन्छु– आवेशक र उत्तेजक कुरा नगर्नुस् । उहिले पृथ्वीनारायणले आफ्ना दिब्य उपदेशमा भनेका थिए– जाइकटक नगर्नु झिकीकटक गर्नु । मैले नम्र निवेदन गर्नु पर्छ भने गर्छु– हामी जाइलाग्न जाँदैनौं, एमालेमाथि कसैले आक्रमण गर्छ भने उसले साह्रै नराम्रो मुल्य चुकाउनु पर्नेछ । त्यता नसोचे राम्रो । नेकपा एमाले दुम लुकाएर भाग्ने पार्टी होइन । एमालेले राणा शासन देख्यो, तानाशाही देख्यो, राजतन्त्र देख्यो, निरंकुशता देख्यो, पञ्चायत देख्यो, जेलनेल देख्यो । धेरै चिज देखेर भोगेर आएको छ एमालेले । एमालेलाई प्रवेश गर्न दिन्न ! अलि आफ्नो थान्काका कुरा गर्नु नि ! केपी ओलीले त रेल चलाउँछु भन्यो, उखान टुक्का हाल्यो भनेर उडाइयो । मूर्खहरुको काम त्यस्तै हुन्छ । तिनीहरुसँग हामी बहस गर्दैनौं तर, रेल चल्छ चलाइन्छ । सर्भे भइरहेको छ अव काम हुन्छ । उत्तर दक्षिण रेल अगाडि बढ्छ । अव हामी यस देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने काममा बिलम्ब गर्न सक्दैनौं । निर्वाचन आउँदैछ । संघर्ष गर्नु पर्ने हुन सक्छ । संघर्षका लागि तयार होऔं । निर्वाचनका लागि तयार होऔं । अगाडि जे जे आउँछ त्यसका लागि तयार होऔं । हामीले कुलोपैनी खन्न देखि लिएर, बाटोघाटो बनाउने देखि लिएर, राष्ट्रियताका लागि संघर्ष र आन्दोलन गर्ने देखि लिएर ध्वांस जमाउनेहरुलाई चुनावमा पछार्नेसम्मका र एमालेलाई विजय बनाउनेसम्मका अभियानलाई अगाडि लैजानु पर्छ । राष्ट्रियता सम्बन्धी बहस अहिले संविधान संशोधनमा गएर अडिएको छ । संविधान संशोधनको ब्याख्या तपाईंहरुले सुन्नु भएको छ । हामीले त संविधान संशोधन गर्ने भन्या छ, राष्ट्रिय हितलाई असर पार्ने भनेर त्यहाँ कहाँनेर लेख्या छ ? भन्छन् । लेखेकै छैन भन्छन् । त्यसैमा मैले भनेको थिएँ– जुवाडेहरुले कौडा खेलाउँछन्, कौडा पछार्छन्, हार जीत कौडाको होइन, पैसाको हुन्छ, सम्पत्तीको हुन्छ, घरजग्गाको हुन्छ । जुवाडेहरुले तासका पत्ती खेलाउँछन्, पत्ती पछार्छन्, हार जीत तासको हुँदैन, सम्पत्तीको हुन्छ । यहाँ त्यसै गरेर संशोधन नामको पत्ती फ्याँकिएको छ । तर, हार जीत राष्ट्रियताको हुन्छ, स्वाभीमानको हार जीत हुन्छ, स्वाधीनताको हार जीत हुन्छ र हाम्रो अखण्डताको हार जीत हुन्छ । सम्मानित सर्बाेच्च अदालतले संविधान संशोधन उपयुक्त छैन भनिसक्यो । छलफल त गर्न सकिन्छ तर, असंबैधानिक कुरा पारित गर्न सकिंदैन, यो असंबैधानिक हुन्छ भनिसक्यो । पारित गर्यौ भने हामीले बदर गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दा भन्दै हिजो देखिहाल्नु भो । हामी रोक्न खोज्दै छौं, लुकेर त्यहीँ बसेको बस्यै गरेर पेश गरे । प्रस्ताव गरिसकेर मन्त्री रोष्ट्रमबाट तल आउनु पर्ने । फेरि बोलाएपछि मन्त्री जानु पर्ने । मन्त्री त उहीँ बस्या बस्यै । गृहमन्त्री भन्या छ, तर, एउटा मन्त्रीको प्रस्ताव अर्काे मन्त्रीले प्रस्तुत गर्न पो रहेछ । गृहमन्त्री आउनु भएन, गृहमन्त्रीको सट्टा कानुन मन्त्री रे । किनभने कानुनमन्त्री माथि नै छ । यसप्रकारको जालझेल छलछाम र बेइमानी के का लागि गर्नु परेको ? किनभने ५ नम्बर प्रदेशको जनता हामी छुट्टिएर बस्दैनौं भनेर उत्रेको छ । त्यहाँका सांसदहरु, अहिलेको सरकारी पार्टीका सांसदहरु समेत त्यसलाई समर्थन जनाउन सकिंदैन भनेर जनताको आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता जनाउन गएका छन् । अनि कहाँका मान्छेका लागि ? के का लागि ? कसका लागि ? त्यहाँका जनताका लागि होइन बाहिरका लागि । नेपालीको पनि होइन, कसैले बोकेकाहरुका लागि । देखाइएको छ, यहाँकै चार पाँच जना । अगाडि सारिएको छ तिनीहरुलाई । तर, यथार्थमा अरुलाई चाहिएको छ यो संशोधन प्रस्ताव । हाम्रै देशको नेपाल सरकार भन्नेले त्यही पनि एउटाको नाम अगाडि नेपाली जोड्या छ, अर्काको नाम अगाडि नेपाल जोड्या छ । नेपालबाट सुरु हुने पार्टी र नेपालीबाट सुरु हुने पार्टीले काम चाहीँ अर्कैको यसरी किन गर्नु पर्यो ? अचम्म लाग्छ । तपाईंहरुलाई लाग्ला, एमालेले के गर्ला ? एमाले नेताहरुले के गर्लान्, संसदीय दलले के गर्ला भन्ने परेको होला । म निश्कर्षमा भन्छु– कहाँनेरी, कुन पाइलो भन्ने कुरा छोड्नुस् । कतिबेला बल कसको खुट्टामा पास गयो, कसको खुट्टामा गएन त्यो पनि छोडिदिनुस् । गोल गर्ने कुरालाई हेर्नुस् । म तपाईंहरुलाई भन्न चाहन्छु– अहिले संसदमा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव यस संसदबाट पारित हुन सक्दैन, पारित भएर अघि बढ्दैन, पारित हुन दिइंदैन । यो प्रस्ताव देशहित विपरित छ, यो प्रस्ताव संविधान विपरित छ । त्यसकारण यसलाई पास हुन हामी दिंदैनौं । निश्कर्ष के हो भने यो पास हुँदैन । साथीहरुले भन्या थिए– लोकमानसिंह कार्कीको महाभियोग दर्ता भयो । पार्टीहरुले निर्णय गर्या छैनन्, कांग्रेसले निर्णय गर्या छैन । पास गर्न दुईतिहाई चाहिन्छ । कांग्रेस विना दुईतिहाई पुग्दैन । कांग्रेस भन्या कस्तो पार्टी हो भने, कहिले कहिले साह्रै बुढो भएपछि साह्रै शिथिलता आउँछ क्या ! कांग्रेस भनेको एउटा शिथिल भएको पार्टी हो । यो छिटो छिटो निर्णय गर्न सक्दैन । एउटा सानो निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यसलाई एकदुई महिना लाग्छ । एमालेले एकछिनमा निर्णय गर्छ । दर्ता गर्ने दिन मैले सबै मुख्य पार्टीका नेताहरुसँग सल्लाह गर्या थिएँ– दर्ता गर्नु पर्ने भयो भनेर । ए हाम्रो त निर्णय हुनु पर्छ भन्या थियो । तर, निर्णय हुँदा हुँदै त्यो निर्णय नै नहुने ठाउँमा पुग्छ । त्यसै भएर माननीय सदस्यहरुले महाभियोग दर्ता गर्नु भएको हो । कांग्रेसले समयमै निर्णय गर्न नसक्ने तर, सर्बाेच्च अदालतले टुंगो लगायो । राम्रो भयो । हुन त संसदले अहिलेसम्म टुंगो लगाइसक्नु पर्ने हो । तर, कांग्रेसले निर्णय गर्न सकेन, संसद ढिलो भो । कांग्रेस हत्तपत्त निर्णय गर्न सक्दैन । के हो विचार, छुट्याउन कांग्रेसलाई गाह्रो छ । हामीले वालवालिका, युवा, बृद्धबृद्धा, उद्यमी, भौतिक संरचना, आर्थिक विकास सबैको योजना बनाएर अघि बढाएका छौं । आफू नेतृत्वमा हुँदा विकासको राम्रो खाका दिएका छौं, बजेट छुट्याएका छौं काम सुरु गरेका छौं । एमालेका विषयमा विरोध गर्ने कुरा कसैसँग केही छैन । अनि भ्रम फिंजाएर, असान्दर्भिक र उद्दण्ड भएर एमालेलाई मधेस पस्न दिइंदैन जस्ता कुराहरु गरेर राजनीति गर्ने दौर चलाइरहेका छन् । त्यस्ता कुराहरुको वास्ता गर्ने भन्दा देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतिर जानु जरुरी छ । तपाईंहले पनि सुन्नु भयो होला– एमालेलाई प्रवेश निषेध, बढार्ने, अव विदा गर्ने कुरा । कतिपयलाई त म जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिनँ, हाम्रै गल्ती हो– नागरिकता दिइसकियो, ठूल्ठूला कुरा गर्न थालिसके ।
हुलाकी राजमार्ग १९ वर्ष अगाडिदेखि चर्चा हुने गरेको तर, काम अगाडि जान नसकेको थियो । हामीले अहिले ४ अर्व २० करोड बजेट छुट्याएर आफैंले निर्माण गर्ने भनेर काम सुरु गरेका छौं । हुलाकी राजमार्गमा १० वटा स्मार्टसिटीहरु आधुनिक शहर निर्माण गर्ने काम हामीले सुरु गरेका छौं । यत्रो वर्षसम्म कति प्रधानमन्त्री भए । तर, विराटनगरको चक्रपथका लागि बजेट छुट्याउन एमालेको सरकार नै चाहियो । अव विराटनगर चक्रपथ बन्छ, जनकपुर चक्रपथ बन्छ । नेकपा एमालेले बजेटमा राजमार्गदेखि सदरमुकाम पुग्ने ६ लेनका बाटा बनाउन योजना बनाएको छ र बजेट छुट्याएको छ । हरेक सदरमुकाममा त्यसरी बाटो जान्छ र हरेक सदरमुकामलाई शहरीकरण गर्न प्रारम्भमै हामीले ५०÷५० करोड बजेट छुट्याएका छौं । यसैवर्ष गरिव परिवारका लागि २० हजार घर बनाउने र हस्तान्तरण गर्ने बजेट राखेका छौं । पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ४ र ६ लेनको बनाउने कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौं । चतरा देखि हेटौंडासम्म अर्काे ४ लेनको बाटो बनाउने कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएर काम सुरु भएको छ । त्यो कुरा पनि यहाँहरुलाई थाहा छ । मेची महाकाली विद्युतीय रेलको सर्भे गरेर काम अगाडि बढाएका छौं । यो कसैले पनि हाहा हुहु गरेर अब रोक्न सक्दैन । रेल चलाउने नेपालमा ! वाह ! वाह ! गरेर अव पूर्वपश्चिम रेल रोकिंदैन । केपी ओलीले त रेल चलाउँछु भन्यो, उखान टुक्का हाल्यो भनेर उडाइयो । मूर्खहरुको काम त्यस्तै हुन्छ । तिनीहरुसँग हामी बहस गर्दैनौं तर, रेल चल्छ चलाइन्छ । सर्भे भइरहेको छ अव काम हुन्छ । उत्तर दक्षिण रेल अगाडि बढ्छ । तराईमा कुन जिल्लालाई कृषिमा कुन विशेष क्षेत्र बनाउने ? अस्ती पुष्पकमल दाहालजी गएर झापामा धानबाली विशेष जोन उद्घाटन गर्नु भो । हामीले बजेट राखिदिएका थियौं, नयाँ योजना बनाएका थियौं । फर्केर आएपछि मैले उहाँलाई सोधेँ– कस्तो लाग्यो ? मैले त राम्रो बुझ्या थिएन राम्रो रहेछ भन्नु भो । फेरि हामी अर्काे पटक सरकारमा गयौं भने हामी सातै प्रदेशमा यस्तो योजना ल्याउँछौं भनेँ । पुष्पकमलजीले यो ज्यादै महत्वपूर्ण योजना रहेछ भन्नु भो । अव पूर्व पश्चिम रेलको शिलान्यास हुन्छ । उहाँहरुलाई त कामसँग होइन, उद्घाटन, शिलान्याससँग मतलव छ । हामीलाई शिलान्यास चराले गरोस् कि मुसाले गरोस् । विकाससँग, कामसँग मतलव छ । तराई मधेसका लागि हामीले धेरै गरेका छौं । अहिले यहाँ मधेस मधेस भनेर कराएको सुन्छु । यहाँका जनता कराएको हो र ? चार जना छन्, मधेस मधेस भनेर कराउने । जनतालाई बाटो चाहिया छ, विद्यालय, अस्पताल चाहिया छ । हामीले विकासक्षेत्रै पिच्छे विश्वविद्यालय दिएका छौं । हामीले क्षेत्रैपिच्छे विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम राख्या छौं । छक्कै परेका छन् दुनियाँ । एमाले एकचोटी सरकारको नेतृत्वमा पुगेको थियो, एउटै बजेटले यत्ति धेरै परिवर्तन गर्ने सोचहरु कसरी आयो ? देशको कायापलट गर्ने योजना कसरी सम्भव भयो ? एउटै बजेटले बाटो देखाएको छ, सपना देखाएको छ, उद्धेश्य दिएको छ । (एमाले मोरङ जिल्ला अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ब्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश)